Eyona mveliso yeUrolithin A & B engumgubo woMvelisi
I-Cofttek inamandla okuvelisa ubuninzi kunye nokubonelela nge-Urolithin A powder; Urolithin B umgubo; I-8-O-Methylurolithin I powder phantsi kwemeko ye-cGMP. Kwaye kunye nomthamo wenyanga wemveliso we820KG.
I-COA ye-Urolithin A powder
I-COA ye-Urolithin B powder
I-COA ye-8-O-Methylurolithin A powder
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neUrolithin A & B Powder, ngoko esi sisikhokelo osidingayo; qinisekisa ukuba ufunda zonke ii-FAQ ezingama-24.
> Yintoni ii-Urolithins?
> Iimolekyuli ezaziwayo ze-Urolithin
> I-Urolithin Ipakethe yoLwazi lwePowder
> Iphakheji yoLwazi lwe-Urolithin B yePowder
> Isebenza Njani IiUrolithins?
> Izibonelelo zeUrolithins
> Umthamo weUrolithins
> Imithombo Yokutya yeUrolithins
> Kutheni le nto kufuneka uthenge kumzi-mveliso wethu womvelisi?
> Yintoni i-Urolithin A?
> Isebenza njani i-Urolithin?
> Zeziphi iziqhamo ezineUrolithin A?
> Isetyenziselwa ntoni iUrolithin?
> Ilungela ntoni i-Urolithin?
> Kukuphi ukutya okuqulethe i-Urolithin A?
> Zeziphi iingenelo zeUrolithin A?
> Siyifumana njani i-Urolithin A kwizidlo zethu?
> Yintoni uMitopure?
> Ngaba iMitopure ikhuselekile ukuba ingatyiwa ngabantu?
> Ndiyithathe nini iMitopure?
> Yintoni i-Urolithin eyongezelelweyo?
> Izibonelelo zezongezo ze-Urolithin
> Yintoni i-Urolithin B?
Ii-Urolithins zivela kwimveliso okanye i-metabolites yezinto ze-ellagic acid ezifana ne-ellagitannins. Ezi zinto zeekhemikhali zidityaniswa zivela kwi-ellagic acid-derivatives yi-gut microbiota.
Kuba iintyatyambo zamathumbu zibalulekile kwimveliso ye-urolithins, inani le-urolithins eliveliswe emzimbeni lixhomekeke kuhlobo lwezinto eziphilayo kwi-flora, eyona nto ibaluleke kakhulu kwiqela leClostridium leptum. Kuxelwe ukuba abantu abane-microbiota abazizityebi kumalungu eli qela bavelisa inani elikhulu kakhulu le-urolithin kunaleyo inezinye izityalo ezinjenge-Bacteroides okanye i-Prevotella.
Ii-Urolithins ziveliswa kwi-punicalagin emathunjini, ngokuchanekileyo njenge-ellagitannins, emva koko ikhutshiwe ngaphandle kumchamo. Ukujonga ukuveliswa kwe-urolithin emzimbeni, amanqanaba abo kufuneka atshekishwe kumchamo womntu otye ukutya okutyebileyo kwi-asidi ye-ellagic okanye isongezelelo ngee-urolithin njengezona zinto ziphambili kubo. I-Urolithin, kanye kwi-plasma, inokufunyanwa ngohlobo lwe-glucuronides.
Ii-Urolithins ngokwendalo ziyafumaneka kukutya okuninzi, nangona ingezizo zonke iimolekyuli zeeurolithin ezinokufumaneka ekutyeni. Nje ukuba ukutya okutyebileyo kwi-asidi ye-ellagic kufakwe, kuxhomekeka kwisisu se-flora sokwaphula i-ellagitannins kunye ne-punicalagin ukuya phambili kwimetabolites ephakathi kunye neemveliso zokuphela; iimolekyuli ze-urolithin.
Ezi molekyuli kutsha nje zifumene ukuthandwa kwaye ziyaqhubeka nokunyuka njengezongezelelo zokutya ngenxa yokuchasana nethumba, ukuguga, ukuthintela ukudumba, kunye nezibonelelo zokuphelisa ukuzimela. Ngapha koko, iimolekyuli ezithile ze-urolithin zinxulunyaniswa namanqanaba okuphucula amandla njengoko zinempembelelo enkulu kwimpilo ye-mitochondrial. Imveliso yamandla emzimbeni yinkqubo eyenzeka kwi-mitochondria, kunye nokuphucula ukusebenza kwale organelle yenye yemisebenzi emininzi ye-Urolithins.
Iimolekyuli ezaziwayo zeUrolithin
I-Urolithins ibhekisa ngokudibeneyo kwiimolekyuli ezahlukeneyo ezingabosapho lwe-urolithin kodwa baneefomula zeekhemikhali ezahlukeneyo, amagama e-IUPAC, izakhiwo zemichiza kunye nemithombo. Ngapha koko, ezi molekyuli zinokusetyenziswa okwahlukileyo kunye nezibonelelo emzimbeni womntu kwaye ngenxa yoko zipapashwa ngokwahlukileyo kwifom yokongeza.
I-Urolithins, emva kophando olubanzi, iyaziwa ngokuqhekeka kwezi molekyuli zilandelayo emzimbeni, nangona kungekho nto ingako eyaziwayo malunga ne-molecule nganye: ● I-Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
I-Urolithin A kunye ne-Urolithin B, eyaziwa njenge-UroA kunye ne-UroB ngokwahlukeneyo, zii-metabolites ezaziwayo ze-Urolithins emzimbeni. Ezi zimbini zikwimolekyuli ezisetyenziswayo ngoku kwizongezo nakwimigubo yokutshintsha ukutya.
Kanye egazini, i-Urolithin A ikhona njenge-Urolithin A glucuronide, kwaye i-Urolithin B inokufunyanwa njenge-Urolithin B glucuronide. Ngenxa yoku, kukholelwa ukuba baneziphumo ezifanayo nezabandulelayo njengakwizifundo ze-vivo azenzekanga ngee-urolithins. Ukunqongophala kwezifundo ze-vivo kwenza kube nzima ukuvavanya ukuba ngaba i-UroA kunye ne-UroB glucuronides zinefuthe elahlukileyo kwi-UroA nakwi-UroB ngokwazo.
I-Urolithin A inesinye isiphumo esinokufunyanwa egazini, oko kukuthi, iUrolithin A sulfate. Zonke ezi zinto ziphuma kuzo zenza imisebenzi yazo egazini kwaye emva koko zicocwe ngaphandle kwenkqubo ngokusebenzisa umchamo.
I-Urolithin D yenye i-molecule ebalulekileyo eveliswa yimiphumo ye-gut microbiota, nangona kunjalo, akukho nto ingako eyaziwayo malunga nemiphumo yayo kunye nokusetyenziswa okunokwenzeka. Okwangoku, ayisetyenziswa kuzo naziphi na izongezo okanye ukutya okutshintshwayo, ngokungafaniyo nabalingane bayo, i-UroA kunye ne-UroB. Ngaphezu koko, imithombo yokutya ye-Urolithin D ayaziwa
I-Urolithin Iphakheji yolwazi lwePowder
I-Urolithin A ayifumaneki ngokwendalo kwimithombo yokutya kwaye yeqela leekhompawundi ezaziwa njenge-benzo-coumarins okanye i-dibenzo-α-pyrones. Ngokwenyani inyanzeliswa ukusuka kwi-ellagitannins ukuya kwi-Urolithin A-8-Methyl Ether ngaphambi kokuba iphinde yahlukaniswe ne-Urolithin A. Le mveliso yokugqibela ifumaneka ngobuninzi kumzi-mveliso wethu wokwenza u-Urolithin A powder. I-MethylUrolithin A powder nayo iyafumaneka ukuze ithengwe ngesixa esikhulu xa kufuneka njalo.
I-Urolithin A ayifumaneki kumanqanaba afanayo, nangamanqanaba afanayo okusetyenziswa kwangaphambi kwayo, kubantu abohlukileyo kuba konke kuxhomekeke kwimisebenzi ye-gut microbiota. Imetabolism ka-Urolithin A kukholelwa ukuba ifuna iGordonibacter urolithinfaciens kunye neGordonibacter pamelaeae kodwa abanye abantu abanezi zinto basabonisa ubuncinci ngaphandle kwempembelelo kwimveliso yemolekyuli.
I-Urolithin A ineempawu ezithile ezenza ukuba ivelele kwamanye amacandelo, njengalawo achazwe kwitafile engezantsi.
I-3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-inye
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) ipyran-6-nye; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) IPYRAN-6-INYE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-inye; Umbala weCastoreum I; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-inye, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-nye); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) ipyran-6-nye
Umgubo oKhanyayo oMthubi
I-soluble kwi-DMSO (3 mg / mL).
Iintsuku ukuya kwiiveki: Kwigumbi elimnyama nelomileyo kwi-0 ukuya kwi-4 degrees C kwiinyanga ukuya kwiminyaka: Kwifriji, kude nolwelo kwi -20 degrees C.
Ukusetyenziswa kokutya njengokutshintsha ukutya kunye nezongezo
Iphakheji yolwazi lwePowder B
I-Urolithin B yindibaniselwano ye-phenolic eqale ukuveliswa ngobuninzi ukusukela ngoJanuwari ka-2021. Inokufunyanwa ngokutya ukutya okuninzi okuyimithombo yendalo yeellagitannins ezinokufakwa emzimbeni kwi-Urolithin B. Kufunyaniswe ukuba inamandla ikhompawundi yokuguga onokuyithenga ngobuninzi ngohlobo lwe-Urolithin B powder.
Iipropathi ezahlukeneyo ze-Urolithin B powder ekhoyo kwinkampani yethu yokuvelisa zikhankanywe ngezantsi:
I-3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, d] ipyran-6-inye
I-AURORA 226; Urolithin B; I-AKOS BBS-00008028; I-3-hydroxy urolithin; 3-hydroxy-6-benzo [c] chromenone; 3-hydroxybenzo [c] chromen-6-inye; 3-Hydroxy-benzo [c] chromen-6-inye; I-3-HYDROXY-6H-DIBENZO [B, D] IPYRAN-6-INYE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-one, 3-hydroxy-; 3-Hydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one AldrichCPR
Umgubo onsundu omdaka
I-Soluble kwi-5mg / mL xa ifudumele, i-liquid clear
I-anti-oxidant kunye ne-Pro-oxidant supplement kunye nomsebenzi we-estrogenic.
Ngaphandle kwezi molekyuli ziphambili ze-Urolithins ezenziwa ngenxa yezenzo ze-gut flora, kukho iimolekyuli ezininzi eziphakathi ezenziwa ngexesha lokophuka kwezandulela. Aba baphakathi baquka:
Akukho nto ingako eyaziwayo malunga naba bantu baphakathi njengangoku, nangona kunjalo, uphando oluthe kratya lunokubonisa izibonelelo kunye nokusetyenziswa kwezi molekyuli zeUrolithin.
Urolithins usebenza njani?
IiUrolithin, njengezinye iikhompawundi ezisetyenziswa kwizongezo, zichaphazela amalungu ahlukeneyo kunye neenkqubo emzimbeni, ukuvelisa iziphumo eziluncedo. Indlela yokusebenza kwee-Urolithins, zombini u-A kunye no-B, zinokwahlulwa zibe ngamasebe aphambili amathandathu, kwaye isebe ngalinye linakho ukuvelisa izibonelelo ezininzi.
● Iimpawu ze-Antioxidant
Esona sibonelelo siphambili sokuba neepropathi zokulwa ne-antioxidant kuncitshisiwe koxinzelelo lwe-oxidative emzimbeni. Uxinzelelo lwe-oxidative lubhekisa kuxinzelelo kwiiseli nakwizicubu zomzimba njengesiphumo sokudibana kwemichiza evelisa iikhompawundi ezingazinzanga, ezikwabizwa ngokuba ziiradicals simahla. Ezi radicals zasimahla zinokubanakho ukuthatha inxaxheba ekuphenduleni kweekhemikhali emzimbeni, imveliso ezonakalisa iiseli kunye nezicubu.
IiUrolithins ziyaluthintela uxinzelelo lwe-oxidative, olukhokelela kuthintelo lokonzakala kweseli kunye nokwandisa amathuba okusinda kweseli. Ezi ziphumo zenziwe ukuba zincitshiswe ekuvelisweni kwe-Intracellular Reactive Oxygen Species (iROS), eluhlobo lweeradicals zasimahla. Ngaphaya koko, iipropathi ze-antioxidant ze-Urolithin A kunye ne-Urolithin B nazo ziyavela ngokuncitshiswa kwe-NADPH oxidase subunit expression, ebaluleke kakhulu ekuphenduleni kwemichiza ekhokelela kuxinzelelo lwe-oxidative.
Ukuvelisa iipropathi zokulwa ne-antioxidant, ii-Urolithins zikwonyusa ukubonakaliswa kwe-antioxidant heme oxygenase-1 nge-Nrf2 / ARE ebonisa indlela. Oku kunceda ekunciphiseni kuphela iikhompawundi eziyingozi kodwa kukonyusa ii-enzymes ezilungileyo ezikhuthaza iipropathi zokulwa ne-antioxidant.
Ii-Urolithins, xa zinikwa iimpuku ezinomonakalo we-LPS owenziwe ngengqondo, zithintele ukusebenza kwe-microglial, okanye ngendlela elula, ukubola kunye nokudumba okungonyusa umngcipheko wokonakaliswa kwengqondo okusisigxina. Esi siphumo se-urolithins kukholelwa ukuba ngumxube weempawu ze-antioxidant kunye neempawu ezichasayo.
● Iipropathi ezichasene nokuvuvukala
Iipropathi ezichasayo zokuthintela ukudumba ze-Urolithins sesinye sezona zizathu ziphambili zodumo lwayo olukhulayo kwihlabathi elongezelelayo. Indlela ezisebenzisa ngayo ezi khompawundi, ngakumbi i-Urolithin A, i-Urolithin B, kunye nefom yeglucuronides, yahluke kakhulu kwaye ivelisa iziphumo ezahlukeneyo ngokulinganayo.
Isiphumo sokuchasana nokudumba kwe-Urolithin A kunye ne-Urolithin B sinendlela efanayo ne-Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs okanye i-NSAID ezinje nge-Ibuprofen kunye ne-Aspirin. Ii-Urolithins zaziwa ngokuba nefuthe kuthintelo kwimveliso ye-PGE2 kunye nembonakalo ye-COX-2. Njengoko ii-NSAID zithintela ukubonakaliswa kwe-COX 1 kunye ne-COX 2, kunokugqitywa ekubeni ii-Urolithins zineziphumo ezichaseneyo zokuchasana.
Iimpawu ezichasayo zokuthintela ukudumba ze-Urolithins zingqinisisiwe ukuba azilwi nje kuphela nokudumba emzimbeni kodwa ziyakwazi ukuguqula umonakalo owenziwe kumalungu ngenxa yokuvuvukala kwexesha elide okukhokelele ekusileleni komzimba. Kuphononongo lwakutsha nje olwenziwe kwiimodeli zezilwanyana, kwafunyaniswa ukuba ukusetyenziswa kwe-urolithin kunakho ukunciphisa i-nephrotoxicity ebangelwa sisiyobisi ngokuthintela ukufa kweeseli kunye nokudumba.
Kwafunyaniswa ukuba i-urolithin A powder, enikwe ngomlomo, yayinefuthe kuthintelo kwindlela yokuvuvukala kunye ne-proapoptotic cascade, yiyo loo nto, ikhusela ukusebenza kwe-renal. Ezi ndawo ze-Urolithin A kunye namanye amanqaku e-urolithins aya kwikamva apho ezi zinto zinokusetyenziselwa amayeza kunye nokusetyenziswa kwazo njengangoku njengezongezelelo.
● Iimpawu zeAnti-Carcinogenic
Ii-Urolithins zikholelwa ekubeni zichasene ne-carcinogenic ngenxa yokukwazi kwabo ukuba neziphumo ezinje ngokubanjwa komjikelo weseli, ukuthintela i-aromatase, ukwenziwa kwe-apoptosis, uxinzelelo lwethumba, ukukhuthazwa kwe-autophagy, kunye ne-senescence, umgaqo okhutshelweyo wokubhalwa kwe-oncogenes, kunye ne-factor factor ukukhula. Ezi ziphumo, ukuba azikho, zinokubangela ukukhula okungalunganga kweeseli zomhlaza. Iimpawu zokuthintela ii-Urolithins zibonakalisiwe, ngakumbi umhlaza webala kunye nomhlaza wekolon, kunye nabaphandi abaninzi bahlanganisela ukusetyenziswa kweeUrolithins njengamayeza anokuthintela umhlaza webala.
Isifundo esenziwe ngo-2018 sifunde iziphumo ze-Urolithin kwindlela ye-MTOR ngenjongo yokufumana unyango kunyango lomhlaza wepancreatic. Umhlaza wepancreatic unxulunyaniswa namazinga aphezulu okusweleka, kodwa uphando lwakutsha nje lubonisa ukuba iUrolithin ayinakho ukunyusa kuphela izinga lokusinda kodwa inqanda ukudityaniswa kweeseli zethumba kwamanye amalungu omzimba, okukhokelela kwimastastasis. I-Urolithin A yafundwa ngokukodwa kwaye iziphumo zazithelekiswa neziphumo eziveliswe yirejimeni yonyango esemgangathweni. Kwagqitywa kwelokuba i-Urolithin A ivelise iziphumo ezingcono xa isetyenziselwa ukulawula umhlaza wepancreatic, kuzo zombini iimeko; xa isetyenziswa yodwa okanye isicwangciso sonyango esiqhelekileyo.
Ngophando oluthe kratya, izibonelelo ze-Urothilins zinokuqulatha unyango lomhlaza wepancreatic ngokunjalo.
● Iimpawu zeAntibacterial
Ii-Urolithins ziyaziwa ngeempawu zazo zokulwa ne-antibacterial kwaye zinesiphumo ngokuthintela amajelo onxibelelwano ezinto ezincinci, zingazivumeli ukuba zihambe okanye zisulele iiseli. Kukwakholelwa ukuba baneempawu zokungunda, nangona indlela eyiyo ingekacaci.
Zimbini izifo ezithi ii-Urolithin zibe nefuthe elinamandla ngakumbi, zikhokelela kukhuseleko lomzimba womntu. Ezi zintsholongwane ziintsholongwane ze-malaria kunye neYersinia enterocolitica, zombini zibangela usulelo olomeleleyo ebantwini. Indlela apho iiUrolithin zineempawu zokulwa neentsholongwane ngaphandle kwento ephilayo iyafana.
● Iipropathi ze-Anti Estrogenic kunye ne-Estrogenic
I-Estrogen yihomoni ebalulekileyo emzimbeni wabasetyhini, kwaye ukwehla kwamanqanaba ayo kunxulunyaniswa neempawu ezinjengokugungxula, ukubanomlilo oshushu, kunye nokuncipha kwethambo. Ngenxa yokubaluleka kwehomoni, iyavakala into yokuba umntu obambeleyo uyakhangelwa. Nangona kunjalo, iihomoni zangaphandle zineziphumo ebezingalindelekanga ezithile ezenza ukusetyenziswa kwazo kungathandeki.
Nangona kunjalo, i-Urolithin A kunye ne-Urolithin B zinesakhiwo esifanayo ne-endo native estrogen kunye nokudibana kwe-estrogen receptors emzimbeni. I-Urolithin A inobumbano obomeleleyo, ngakumbi i-alpha receptor xa kuthelekiswa ne-beta receptor. Nangona zombini ezi zinto zinokufana nokwakheka kwe-estrogen, ii-urolithins zineempawu ze-estrogenic kunye ne-anti-estrogenic, ngokungafaniyo ne-estrogen engapheliyo.
Ubume besiphumo se-Urolithins bubenza ukuba babe lukhetho olunokubakho kunyango lweengxaki ezithile ezivela xa kunikwa i-estrogen engaphandle ukunyanga iimpawu zokusilela kwe-estrogen.
● Ukuthintelwa kweProteni Glycation
Iprotein glycation yinkqubo apho imolekyuli yeswekile ibotshelelwe kwiproteni. Le nkqubo ibonwa ngexesha lokuguga okanye njengenxalenye yeengxaki ezithile. Ii-Urolithins zithintela ukongezwa kweswekile, yiyo loo nto kubangela ukuba kungabikho glycation. Ngapha koko, zithintela ukwakheka kokugqibela kwe-glycation endproducts, ekuqokeleleni inyathelo elibalulekileyo kuphuhliso lwesifo seswekile.
IiUrolithins zineendlela ezahlukeneyo zokwenza imveliso ukukhusela izibonelelo ezahlukeneyo emzimbeni womntu. I-Urolithin A powder kunye ne-Urolithin B powder inceda ukuvelisa izongezo ezidumileyo ngenxa yezibonelelo zezithako eziphambili. Zonke izibonelelo zezi zinto zemichiza zixhaswa bubungqina besayensi, kwaye kusenziwa uphando oluthe kratya ukuxhasa ukongezwa kwee-Urolithins kwizikhokelo zonyango lweengxaki ezahlukeneyo.
Izibonelelo zezi khompawundi, ngokusekwe kwiinkqubo ezichazwe apha ngasentla, zibandakanya:
IiUrolithins zitsalwe kukutya okunee-ellagitannins ezininzi ezaziwa njengezityebi kwii-antioxidants. Umthombo wokutya oqhelekileyo we-ellagitannins kunye ne-ellagic acid ziirharnate, kwaye zikwangumthombo omkhulu wee-antioxidants. Nangona kunjalo, kubalulekile ukwahlula ukuba iipropathi ye-antioxidant yomthombo wokutya kunye nee-urolithins ziyafana okanye ukuba umntu unamandla aphezulu kunenye.
Izifundo zokuqala ze-Urolithin A kunye ne-Urolithin B zibonise ukuba iziphumo zokulwa ne-antioxidant kwezi zazingamaxesha angama-42 ngaphantsi kwesiqhamo ngokwaso, yiyo loo nto oku kuthetha ukuba ezi khompawundi zazingazenzi izithako ezifanelekileyo zokuncedisa.
Nangona kunjalo, uphononongo lwamva nje olunendlela eyahlukileyo yohlalutyo lubonisa ukuba i-Urolithin A kunye ne-B zombini ziyasebenza kwaye zinamandla okulwa ne-antioxidant eziza kulwa nefuthe loxinzelelo lwe-oxidative. Xa kwa indlela efanayo yohlalutyo yayisetyenziselwa ukufunda zonke ii-urolithin ukubona ukuba yeyiphi eyona inamandla, i-Urolithin A yema ngaphandle. Iziphumo zaphinda zaphinda zaveliswa kwisifundo esifanayo kunye no-Urolithin A okhokelayo kwi-potency, kwakhona.
Ngapha koko, olunye lwezifundo lujolise ekuvavanyeni iipropathi zokulwa nezixhobo zemichiza ngokuvavanya amandla abo okulwa noxinzelelo lwe-oxidative. Ukulungiselela olu phononongo, abaphandi bonyanzelisa uxinzelelo kwiiseli ze-neuronal kwaye xa bevezwa kwii-Urolithins, ngakumbi i-Urolithin B, baqaphela ukwehla okuphawulekayo koxinzelelo kunye nokunyuka kokuphila kweeseli ze-neuronal.
Iimpawu ezichasayo zokudumba ze-Urolithins zivelisa izibonelelo ezininzi, zonke ezo zibonakaliswe ngokwenzululwazi.
Unyango olwenziwe ekhaya lonyango lwe-malaria olusetyenziswa kakhulu kwiindawo ezithile zasemaphandleni kubandakanya ukusetyenziswa kwePomegranate. Abaphandi bazamile ukuqonda isiphumo esilungileyo sesi sixhobo kunyango lwe-malaria ngokudibanisa iziphumo kunye nee-Urolithins ezixutywe emathunjini ukusuka kwirharnate.
Uphononongo lwenziwe ukujonga isiphumo se-Urolithins ekunyangeni isifo seengcongconi ngokuveza iiseli ze-monocytic ezosulelekileyo kwii-Urolithins. Olu phononongo lufumanise ukuba iikhompawundi zemichiza zithintela ukukhutshwa kwe-MMP-9, nto leyo ebalulekileyo kwimetalloproteinase kuphuhliso nakwintsholongwane egazini yemalariya. Ukuthintela ikhompawundi kuthintela imalariya ekubeni yintsholongwane emzimbeni, yiyo loo nto kukholelwa ukuba inefuthe lokulwa nemalariya.
Iziphumo zophononongo zikwabonakalisile ukuba ii-Urolithins zithintele ukubonakaliswa kwe-mRNA yezifo ezibangelwa yi-malaria, okukhokelela ekuthinteleni ngakumbi ukubanakho kweentsholongwane. Iziphumo zolu phononongo zibonisa ukuba iziphumo eziluncedo zamayeza enziwe ekhaya kubandakanya neerharnate zibangelwa ziziphumo ze-urolithin.
2. Iziphumo kwiiseli ze-Endothelial
I-atherosclerosis yimeko eqhelekileyo ekhokelela kwizithuko zentliziyo kunye ne-infyoction ye-myocardial. Izinto ezimbini eziqhelekileyo ezibangela ukukhula kwe-atherosclerosis kukungasebenzi kakuhle kunye nokudumba. Izifundo zamva nje zizamile ukungqina ukuba iipropathi ezichasene nokudumba kwe-Urolithin zinokuthintela ukungasebenzi kakuhle kwe-endothelial, yiyo loo nto kulawulwa ukwakheka kwe-atherosclerosis kunye nophuhliso.
I-Urolithin A yafunyanwa ngabaphandi ukuba babe nelona nyathelo liphezulu lokulwa nokudumba phakathi kwazo zonke ii-urolithins. Uphononongo lwamva nje lujolise kwiiseli ze-endothelial zabantu ezazifakwe i-LDL ene-oxidized, eyimfuneko yokwakheka kwe-atherosclerosis, kunye ne-Urolithin A. ukunciphisa ukuvuvukala kunye nokuhla kwamandla eeseli, ngakumbi ii-monocytes ukubambelela kwiiseli ze-endothelial, ngokwahlukeneyo. Ukuncitshiswa kokubambelela kwi-monocytic kunciphisa ukungasebenzi kakuhle kwe-endothelial.
Ngaphaya koko, i-Urolithin A yafunyanwa ukunciphisa ukubonakaliswa kwe-tumor necrosis factor α, i-interleukin 6, kunye ne-endothelin 1; Zonke ii-cytokines ezichasayo.
3. Iziphumo kwiifibroblast kwiColon
IColon ibonakalisiwe kwizifo ezingaqhelekanga kunye nezinto zokutya ezenza ukuba sesichengeni sokudumba, ekuhambeni kwexesha kungakhokelela kwimicimbi yezempilo eliqela. Njengoko i-Urolithin A kunye ne-Urolithin B ziveliswa ziintyatyambo zamathumbu, kubalulekile ukuba wazi iziphumo zazo kwindawo yokuqala emzimbeni ezakhiwe ngayo.
Ukufunda iziphumo ze-Urolithins kwiiseli zekholoni kunye ne-fibroblasts, abaphandi benza uvavanyo apho i-fibroblast yavezwa kwii-cytokines ezinokutsha kunye ne-Urolithins. Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, kwafunyaniswa ukuba iiUrolithins zithintela ukubambelela kwi-monocyte kunye nokufuduka kwe-fibroblast ukuthintela ukudumba kwikholoni.
Ngaphaya koko, kwafunyaniswa ukuba ii-Urolithins zithintele ukwenziwa kwento ye-NF-κB, ebalulekileyo kulawulo lokudumba. Ngapha koko, abaphandi bakholelwa ukuba le yeyona nto iphambili ekuchaseni ii-urolithins.
IiUrolithin zinxulunyaniswa neepropathi ezichasene nomhlaza, kwaye indlela yezi zinto zichazwe ngasentla. Nangona kunjalo, izibonelelo zezi zinto zichazwe apha ngezantsi:
1. Ukukhuselwa kwiCancer Prostate
Ukuchongwa kwe-Urolithins emzimbeni kuhlala kwenziwa kusetyenziswa igazi okanye umchamo; Nangona kunjalo, banokufunyanwa kwikholoni yamadoda nabasetyhini kunye neprostate gland yamadoda.
Ngenxa yoku kufumanisa, abaphandi bazamile ukuvavanya ukuba izibonelelo zeekhemikhali ziyabonakala kwi-Prostate gland njengakwikholoni. Yiyo loo nto uphononongo luyilelwe, iziphumo ezingqina ukuba ii-Urolithin zinefuthe lokukhusela kwi-prostate gland.
Kwafunyaniswa ukuba i-Urolithin A kunye ne-Urolithin B, kunye ne-Urolithin C kunye ne-Urolithin D yathintela i-enzyme ye-CYP1B1 kwi-prostate gland. Le enzyme ijolise kwichemotherapy kwaye yayithintelwe ngamandla yi-Urolithin A, xa kuthelekiswa nezinye ii-urolithins. Baye bathintela i-CYP1A1, nangona kunjalo, uxinzelelo oluphezulu lwee-urolithins kwakufuneka ukuba zivelise loo nto.
Olunye uphononongo lwenziwe kufundo lweprotrate ye-Urolithins. Kwafunyaniswa ukuba i-Urolithin A inefuthe elichasene nomhlaza kumhlaza wesibeletho kuzo zombini, i-p53 exhomekeke kuyo kunye ne-p53 ngendlela ezimeleyo.
2.I-Topoisomerase 2 kunye ne-CK 2 inhibition
IiUrolithins zineempawu ezichasene nomhlaza ngokuthintela iindlela ezininzi zeemolekyuli ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ezikhokelela kuthintelo lokukhula komhlaza. I-enzyme ye-CK2 yi-enzyme ebalulekileyo ethatha inxaxheba kwiindlela ezinje ngeemolekyuli, eyona nto iphambili kuyo kukukhuthaza ukudumba kunye nomhlaza.
Ii-Urolithins zithintela iindlela ezahlukeneyo ukufikelela kwi-enzyme ekuyo yonke indawo, i-CK2 ekugqibeleni inqanda ukusebenza kwayo, njengepropathi yokukhuthaza umhlaza. I-Urolithin A ibonakalisiwe ukuba inamandla CK2 inhibitor, kwi-silico.
Ngokufanayo, iTopoisomerase 2 inhibition kukholelwa ukuba ineziphumo ezichasene nomhlaza. Ngapha koko, lo matshini usetyenziswa ziiarhente ezithile zekhemotherapy ezinje ngeDoxorubicin. Kuphononongo lwakutsha nje, kwafunyaniswa ukuba iUrolithin A inamandla ngaphezu kweDoxorubicin ekuthinteleni iTopoisomerase 2, yiyo loo nto, ifuna ukongezwa kwayo kwizikhokelo ezikhoyo ngoku zokunyanga eminye imihlaza.
Iimpawu ze-Urolithins ezichasene ne-antibacterial zixhomekeke kwi-Quorum Sensing Inhibition esusa amandla e-microorganism ukunxibelelana, ukuhamba, kunye nokwenza izinto ezinobungozi. Yindlela ebalulekileyo yokusinda kwentsholongwane, kunye nokuthintela iUrolithins kuyabulala amagciwane.
Eyona nto iphambili kwi-antibacterial ye-Urolithin sisakhono sayo sokukhusela amathumbu kwindawo engaphezulu kweYersinia enterocolitica. Ngapha koko, ii-Urolithins zinxulunyaniswa nokumodareyitha kweentyatyambo zamanzi esiswini, izityalo ezifanayo ezijongene nemveliso yazo kwasekuqaleni. Oku kubaluleke ngakumbi kuba zizinto ezithile eziphilayo ezinokunyusa imveliso yeUrolithins.
IiUrolithins zibopha ii-Estrogen receptors kwaye zivelise zombini, iipropathi ze-estrogenic kunye ne-anti-estrogenic. Oku kuyenza ukuba ibe ngumgqatswa omkhulu kwi-Selective Estrogen Receptor Modulators okanye ii-SERMs, ezona ndlela ziphambili zokuba nefuthe elihle kwindawo enye yomzimba kunye nefuthe lothintelo kwenye indawo yomzimba.
Kwesinye sophando olwenziwe kwiziphumo ze-urolithins kwii-estrogen receptors, kwafunyaniswa ukuba, ngakumbi i-urolithin A, inqanda ukubonakaliswa kofuzo lweeseli zomhlaza ze-end-endometrium, okukhokelela kuxinzelelo lomhlaza we-endometrium. I-Endometrial hypertrophy sisiphumo esibi secala elichazayo le-estogenus engaphandle kwi-neoplasia yeposi njengabafazi abathatha unyango lwe-hormone, kwaye ukusetyenziswa kwe-urolithins kukholelwa ekubeni kunefuthe elikhuselayo kwi-endometrium. Nangona kunjalo, olunye uphando kufuneka lwenziwe ngaphambi kokuba ii-Urolithins zibe ngamayeza e-SERM alandelayo.
Ubukho beemveliso zokuphela kwexesha le-glycation luphawu lwe-hyperglycemia oluchaphazela abantu kwisifo seswekile esimalunga nesifo sentliziyo okanye isifo se-Alzheimer's. I-Urolithin A kunye ne-Urolithin B ibonakalisiwe ukuba inefuthe lokuchasana ne-glycation ethintela ukuthukwa kwentliziyo kunye nokunciphisa umngcipheko we-neurodegeneration kakhulu.
Yiyo loo nto ukuthintelwa kweprotein glycation yi-Urolithins kukholelwa ukuba ineziphumo ze-cardioprotective kunye ne-neuroprotective.
Izibonelelo ze-Urolithin A zikhankanywe apha ngezantsi:
● Yandisa ixesha lokuphila
Ukwaluphala, uxinzelelo kunye nokuphazamiseka okuthile kunokonakalisa i-mitochondria, ebaluleke kakhulu kwimveliso yamandla yesiqhelo kunye nokusetyenziswa komzimba. Ngaphaya koko, i-mitochondria ihlala ibizwa ngokuba 'yindawo yamandla eseli', oko kuthetha ukubaluleka kokusebenza kweseli. Ngenxa yoko, nawuphi na umonakalo kweli gunya lombane unokuchaphazela kakubi iseli kunye nokunciphisa ixesha lokuphila.
Ii-Urolithins zenza into ethile eyaziwa ngokuba yi-mitophagy evumela umzimba ukuba ususe i-mitochondria eyonakeleyo, ngaphandle kwesizathu somonakalo, kwaye wandise ixesha lokuphila. Ngokusekwe kubungakanani bomonakalo, i-mitochondria inokuphinda isetyenziswe kwakhona kwizondlo kunye nemveliso yamandla.
● Ukunyanga i-Neuroprotective
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, ii-urolithin zineempawu ezichaseneyo nokudumba kwaye zezi zinto zikhuthaza ukwakheka kweeseli ze-neuronal kwingqondo, enefuthe elihle kulwazi kunye nokugcinwa kwememori. Ngaphaya koko, i-Urolithin A ikhusela ngokuchasene ne-neurodegeneration ebonwa sisifo se-Alzheimer, yiyo loo nto ke sisiphumo se-neuroprotective.
● Thintela umhlaza wedlala lobudoda
I-Urolithin A inezinto ezichasene nomhlaza kodwa zibonakala ngakumbi kwimeko yomhlaza wedlala lobudoda, kunye nezifundo ezininzi ezikhuthaza ukusetyenziswa kwepomegranate kunye neminye imithombo yeUrolithins kunyango lomhlaza wesibeletho.
● Nyanga Ukutyeba Ngokugqithiseleyo
I-Urolithin A ineempembelelo ezichasene nokutyeba kakhulu njengoko ingathinteli nje kuphela ukuqokelelana kweeseli ezinamanqatha emzimbeni kodwa ikwathintela nabamakishi abanoxanduva lwe-adipogenesis. Kwisifundo esenziwe kwiimodeli zezilwanyana, kwafunyaniswa ukuba i-Urolithin A inefuthe eliphezulu kwi-T3 hormone ye-thyroid, ekhokelela kwinkcitho yamandla kwiimpuku. Oku kunciphisa i-thermogenesis kwaye kubangele amanqatha emdaka anyibilike, ngelixa amafutha amhlophe enyanzelwa ukuba abe mnyama.
Kwakweso sifundo sinye, kwafunyaniswa ukuba i-URolithin A inefuthe lokuthintela ukutyeba nkqu nakwiimpuku ezondliwe ukutya okunamafutha aphezulu. Oku kubonisa isithembiso esikhulu malunga nokutyeba kakhulu kwaye abaphandi bacele ukusetyenziswa kwabantu kwezi zinto zifunyanisiweyo ukuze bakwazi ukusebenzisa eli qela ukulwa umbandela wokutyeba kakhulu.
Izibonelelo ze-Urolithin B zezi zilandelayo:
● Thintela ukuphulukana nezihlunu
Urolithin B wabelana ngezibonelelo ezithile ze-Urolithin A kodwa unesibonelelo esithile, esahlukileyo kuye yedwa. I-Urolithin B yaziwa ngokuthintela ukulahleka kwemisipha kuwo omabini amanqanaba omzimba kunye nophendlo lwezifo. Ngapha koko, ikhuthaza ukukhula kwamathambo ngokunyusa iiprotein synthesis kwiimisipha.
Ikwanayo nefuthe lothintelo kwi-atrophy yemisipha njengoko kubonisiwe kuphononongo olwenziwe kwiimpuku ezazisuswe intsholongwane. Oku ngekukhokelele kwi-atrophy yemisipha kodwa iimpuku zafakwa iimpompo ezincinci ze-osmotic eziqhubeka ukubanika u-Urolithin B. Kwafunyaniswa ukuba ezi mpuku zinendlela yabo ye-ubiquitin-proteasome ecinezelweyo, ekhokelele ekusweleni okucacileyo kwe-atrophy yemisipha ngaphandle kwesahlulo se-sciatic nerve .
Ii-Urolithins zithathwe kwimixube yendalo kwaye izongezo zazo zithathwa njengezinyamezeleka kungekho ntatheli. Nangona kunjalo, kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba ezi zinto zisephantsi kophando kwaye zinemida yethamo ekufuneka ilandelwe ngokungqongqo.
Emva kophando olunzulu ngezibonelelo ze-Urolithin A, bekukho uphando oluninzi olwenziwe ukuvavanya idosi elungileyo yale khompawundi. Ukufunxwa, ukugaywa, ukuColwa kweMetabolism, kunye nesifundo sokupheliswa kwenzelwa ukuhlalutya amanqaku ekhompawundi.
Uphononongo lwahlulwe kubini, kuxhomekeke kwinani leentsuku, kwaye kwafunyaniswa ukuba isifundo seentsuku ezingama-28 sine-0, 0.175, 1.75, kunye ne-5.0% ye-Urolithin A exutywe ekudleni nakwisifundo seentsuku ezingama-90 kunye no-0, 1.25, I-2.5, kunye ne-5.0% i-Urolithin A exutywe ekutyeni ayibonisanga lutshintsho kwiiparameter zeklinikhi, ikhemistri yegazi, okanye ihematology, kwaye ayikhange ichaze naziphi na iindlela ezinobungozi. Zombini ezi zifundo zazineyona dosi iphezulu yavavanywa kwi-5% ye-UA ngokobunzima bokutya okukhokelele kwezi dosi zilandelayo; I-3451 mg / kg BW / ngosuku emadodeni kunye ne-3826 mg / kg BW / ngosuku kubantu ababhinqileyo kwisifundo se-90 seentsuku zomlomo.
Ifana ne-Urolithin A, Urolithin B yafundwa ngokubanzi ukuvavanya idosi efanelekileyo. Nangona kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izifundo zijolise kwidosi ekhuselekileyo ukufezekisa ukonyuka kwemisipha ngokufanelekileyo. Le dosi ifunyenwe iyi-15uM, kubo bobabini abesilisa nabasetyhini, ngaphandle kobunzima.
Le khompawundi isetyenziswa ngokunjalo, ikakhulu kuba iphakathi ngexesha lokuveliswa kwe-Urolithin A. Nangona kunjalo, akukho phando lwaneleyo lwenziweyo kumthamo ofanelekileyo omiselweyo kule Urolithin.
Imithombo yokutya yeeUrolithins
Ii-Urolithins azifumaneki ngokwendalo kuwo nawuphi na umthombo wokutya, nangona kunjalo zifunyanwa njenge-ellagitannins. Ezi tanins zihlahlela zibe yi-ellagic acid, ethi iphinde iqhubekeke ibe yi-Urolithin A 8-Methyl ether, emva koko iye kwi-Urolithin A, kwaye ekugqibeleni, Urolithin B. Ukutya okunotyebileyo kwii-Urolithins zezi:
Iziqhamo (mg / 100g ubunzima obutsha)
Iwayini ebomvu ene-Oak ubudala
Njengoko kubonisiwe kwitafile, ii-Cloudberries ziziqhamo ezine-Ellagitannins ephezulu kunye ne-Ellagic acid, enePomegranate njengesibini esisondeleyo. Ipomegranate Juice, nangona kunjalo, ingumthombo onamandla ngakumbi, phantse amaxesha amathathu anamandla njenge-Cloudberries.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umxholo we-asidi ye-ellagic kwimithombo yokutya ayilingani nomlinganiselo ofanayo we-urolithin emzimbeni. Ukufumaneka kwe-URolithins kuxhomekeke kakhulu kwi-gut microbiota yomntu ngamnye.
Kutheni ufanele uthenge kwiFektri yoMvelisi wethu?
I-Urolithin Powder A kunye ne-Urolithin Powder B ziyafumaneka ngobuninzi, kumzi-mveliso wethu wokudibanisa odibanisa imveliso, uphando, uphuhliso kunye nentengiso yezi zongezo. Iimveliso zethu zenziwe kusetyenziswa ubuchwephesha obugqithisileyo ukulandela zonke izikhokelo zokhuseleko, eziqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokhuseleko lwemveliso yokugqibela. Zonke iimveliso ziphandiwe ngaphambi kokwenza kwaye zivavanywa ngocoselelo ngexesha nasemva kwemveliso ukufezekisa imigangatho yakho esemgangathweni.
Emva kwemveliso, iimveliso ziyavavanywa kwiilebhu zethu elinye ixesha lokujonga umgangatho, amandla kunye nokhuseleko lwe-Urolithin powders kunye nezinye iimveliso. Xa sele zilungele ukuhanjiswa, iimveliso ziyapakishwa kwaye zigcinwe kumaziko afanelekileyo, kubushushu obufanelekileyo ngelixa ulandela zonke izikhokelo zokuqinisekisa ukuba imveliso ekumgangatho ophezulu ifikelela kuwe. I-Urolithin powders ayivelwanga kukukhanya kwelanga ngexesha lokuhambisa, ukupakisha, okanye ukugcinwa njengoko kunokonakalisa imveliso yokugqibela.
Ukuthenga i-Urolithin A powder kunye ne-Urolithin B powder evela kumzi-mveliso wethu oqinisekisa imveliso ekumgangatho ophezulu ngamaxabiso afikelelekayo.
I-Urolithin A (UA) iveliswa ngokusisigxina ngamabhaktheriya amathumbu omntu abonakaliswe kwi-dietary polyphenolic compounds ezibandakanya i-ellagic acid (EA) kunye ne-ellagitannins (ET), njenge-punicalagin. Ezi precursors polyphenolic zifumaneka ngokubanzi kwiziqhamo (irharnate kunye namaqunube athile) kunye namantongomane (walnuts kunye pecans).
Urolithin isebenza njani?
I-Urolithin A (UA) Ngaba i-Gut Microbiome-Derived Compound kunye neeNzuzo zezeMpilo zokuguga kunye neZifo. Iimveliso ezininzi zokutya ziqulethe i-polyphenols yendalo ellagitannins (ETs) kunye ne-ellagic acid (EA). ... Emva kokuba ifakwe, i-UA ichaphazela kakuhle impilo ye-mitochondrial kunye neselula kwiimeko ezinxulumene neminyaka kunye nezifo.
Zeziphi iziqhamo eziqulathe Urolithin A?
Isetyenziselwa ntoni i-Urolithin?
I-gut microbiota i-metabolizes ellagic acid ebangela ukubunjwa kwe-urolithins ye-bioactive A, B, C, kunye ne-D. I-Urolithin A (UA) iyona nto isebenzayo kunye ne-metabolite ye-gut esebenzayo kwaye isebenza njenge-agent enamandla yokuchasana nokuvuvukala kunye ne-anti-oxidant.
Ilungele ntoni i-Urolithin?
I-Urolithin A yenza i-mitophagy kwaye yandise ixesha lokuphila kwi-C. elegans kwaye yandisa ukusebenza kwemisipha kwiigundane.
Kukuphi ukutya okuqulethe i-Urolithin A?
Imithombo yokutya ye-urolithin A
Ukuza kuthi ga ngoku, uphando lufumene ukuba irharnati, amaqunube, amaqunube, icamu-camu, iwalnuts, i-chestnuts, i-pistachios, i-pecans, iti ephuhliweyo, kunye newayini ene-oak ene-barrel endala kunye ne-spirit ziqukethe i-ellagic acid kunye / okanye i-ellagitannins.
Ziziphi iingenelo ze-Urolithin A?
I-Urolithin A (UA) yindalo yokutya, i-microflora-derived metabolite eboniswa ukuvuselela i-mitophagy kunye nokuphucula impilo yemisipha kwizilwanyana ezindala kunye nakwiimodeli zangaphambili zokuguga.
Siyifumana njani i-Urolithin A kwizidlo zethu?
I-Mitopure yindlela yobunikazi kunye necocekileyo kakhulu ye-Urolithin A. Inceda imizimba yethu ukuba ithintele ukuhla kweeselula ezinxulumene neminyaka ngokuvuselela iijenereyitha zamandla ngaphakathi kweeseli zethu; oko kukuthi imitochondria yethu. ... I-Urolithin A iphucula ukusebenza kwe-mitochondrial kunye nemisipha, inika amandla amaninzi kwiiseli.
Ngaba iMitopure ikhuselekile ukuba ingatyiwa ngabantu?
Ukongeza, kwizifundo zeklinikhi zabantu uMitopure wazimisela ukuba ukhuselekile. (Singh et al, 2017). I-Mitopure iphinde yaphononongwa ngokuncomekayo nguLawulo lokuTya kunye neChiza lwase-US (i-FDA) ngokulandela i-GRAS (eyaziwa ngokubanzi njengekhuselekile).
Ndiyithathe nini iMitopure?
Sincoma ukuthatha ii-softgels ezimbini zeMitopure ngosuku ngeziphumo ezifanelekileyo. Ngelixa unokuthatha iMitopure nangaliphi na ixesha losuku, sicebisa ukuba uyithathe ngesidlo sakusasa, njengoko le yiprotocol esiyisebenzisileyo kulingo lwethu lwezonyango.
Yintoni i-Urolithin eyongezelelweyo?
I-Urolithin A (UA) Ngaba i-Gut Microbiome-Derived Compound kunye neeNzuzo zezeMpilo zokuguga kunye neZifo. Iimveliso ezininzi zokutya ziqulethe i-polyphenols yendalo ellagitannins (ETs) kunye ne-ellagic acid (EA). Emva kokutya ukutya okunjalo, i-ETs kunye ne-EA i-metabolized kwi-UA yi-microflora emathunjini amakhulu.
Iinzuzo ezongezelelekileyo ze-Urolithin A
I-Urolithin A iphucula ukusebenza kwe-mitochondrial kunye nemisipha, inika amandla amaninzi kwiiseli. Yinto eyenzeke ngokwemvelo echasene nokuguga enokuthi ixhamle nabani na ojonge ukugcina impilo yemisipha.
Yintoni i-Urolithin B?
I-Urobolin yongezelela evela kwi-punica granatum (iPomegranate) esemgangathweni kwi-Urolithin B. I-Urobolin njengesongezelelo inokunciphisa umonakalo we-muscle onamava ngexesha lokuzivocavoca okukhulu kunye nokukhusela i-muscle ngokuchasene noxinzelelo olubangelwa kukutya okunamafutha aphezulu.
UTotiger TM, uSrinivasan S, uJala VR, et al. I-Urolithin A, iNoveli yeNdalo yeNdalo kwiithagethi ze-PI3K / AKT / mTOR kwiPancreatic Cancer. Umhlaza Cancer Ther. 2019; 18 (2): 301-311. ikhonkco: 10.1158 / 1535-7163.MCT-18-0464.
UGuada M, uGanugula R, uVadhanam M, uRavi Kumar MNV. I-Urolithin A iyanciphisa i-Cisplatin-ye-Nephrotoxicity ekhutshiweyo ngokuthintela ukuvuvukala kweRenal kunye ne-Apoptosis kwiModeli yoVavanyo lweeRat. J Pharmacol Exp Ther. Ngo-2017; 363 (1): 58-65. ikhonkco: 10.1124 / jpet.117.242420.
UJuan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, uFrancisco Tomás-Barberán, "Ukubaluleka kwe-Biological ye-Urolithins, i-Gut Microbial Ellagic Acid-Derives Metabolites: Ubungqina ngoku" Ngo-2013, iNqaku le-ID 270418, iphepha eli-15, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/270418.
U-Lee G, iPark JS, uLee EJ, uAhn JH, uKim HS. Iinkqubo ezichasene nokuvuvukala kunye ne-antioxidant ye-urolithin B kwi-microglia esebenzayo. Unyango lwezonyango. 2019; 55: 50-57. ikhonkco: 10.1016 / j.phymed.2018.06.032.
I-Han QA, i-Yan C, i-Wang L, i-Li G, i-Xu Y, i-Xia X. I-Urolithin A ifumana ukungasebenzi kakuhle kwe-ox-LDL-incothelial endodhelial inxenye ngokumodareyitha indlela ye-microRNA-27 kunye ne-ERK / PPAR-γ. Ukutya Res kweMon Nutr. Ngo-2016; 60 (9): 1933-1943. ikhonkco: 10.1002 / mnfr.201500827.